MB 2020 Martsa - Fiangonan'Andriamanitra maneran-tany Switzerland
Iza moa izahay? > Taratasy amin'ny mpiasa avy amin'i J. Tkach > MB 2020 March
Na manao ahoana na manao ahoana ny toe-javatra misy anao, na manao ahoana na manao ahoana ny toe-javatra manjombona, dia mitoetra ho mahatoky ilay Andriamanitsika be famindrampo ary Izy no Mpamonjy antsika rehetra sy be fitiavana. Araka ny nosoratan’i Paoly, dia tsy misy mahasaraka antsika amin’Andriamanitra na mahasaraka antsika amin’ny fitiavany: “Inona ary no hahasaraka antsika amin’i Kristy sy ny fitiavany? Fijaliana sy tahotra angamba? Fanenjehana? hanoanana? Fahantrana? Loza sa fahafatesana mahery setra? Tena mitondra anay araka izay efa voalaza ao amin’ny Soratra Masina hoe: Satria Anao izahay, Tompo ô, enjehina sy vonoina hatraiza hatraiza izahay, ary vonoina tahaka ny ondry! Kanefa, na dia izany aza: ao anatin'ny fahoriana dia mandresy izany rehetra izany isika amin'ny alalan'i Kristy, Izay tia antsika. Satria matoky tanteraka aho: na fahafatesana, na fiainana, na anjely, na demonia, na ankehitriny, na ho avy, na hery, na ambony, na ambany, na inona na inona amin’izao tontolo izao, dia tsy hahasaraka antsika amin’ny fitiavan’Andriamanitra izay omeny antsika ao amin’i Jesosy Kristy. , Tomponay, omeo » (Romana 8,35-39 Fanantenana ho an’ny rehetra).
Rehefa miatrika krizy coronavirus dia avelao i Jesosy ho lohalaharana amin'ny Fanahy. Fotoana izao hampahafantarana ny maha-Kristianina antsika fa tsy hanavahana azy io. Fotoana hanaovana izany fa tsy hanafina izany amin'ny zoron-tranontsika. Mety mila mitoka-monina isika, saingy tsy midika izany fa tokony hitoka-monina amin’i Jesosy izay mitoetra ao anatintsika isika. Aoka ho ao anatintsika ny eritreriny rehefa mamaly ny tarehin-javatra miharatsy isika. Afaka herinandro vitsivitsy dia hahatsiaro ny fomba nanehoan’i Jesosy Kristy ny tenany tsy nisy kilema teo anatrehan’Andriamanitra tamin’ny alalan’ny Fanahy mandrakizay ny tenan’i Kristy rehetra: “Tsy mainka va ny ran’i Jesosy Kristy hanavao antsika ao anatiny ka hanasa ny fahotantsika! Feno ny Fanahin’Andriamanitra mandrakizay izy, ka nanolotra ny tenany ho sorona tsy misy kilema ho antsika ho an’Andriamanitra. Izany no mahatonga ny helotsika izay mitarika ho amin'ny fahafatesana ihany, ary voadio ny fieritreretana. Ankehitriny dia afaka manompo an’Andriamanitra velona isika » (Hebreo 9,14 Fanantenana ho an'ny rehetra). Eo anivon’ny filantsika, dia aoka isika hanohy hanompo an’Andriamanitra velona.
Ahoana no ahafahantsika manao izany? Ahoana no ahafahantsika manompo ny hafa rehefa miezaka manao fanalavirana ara-tsosialy sy mikarakara ny tenantsika isika? Rehefa azo antoka sy azo atao dia ampio ny hafa. Raha foanana ny fotoam-pivavahana amin'izao fotoana izao, dia aza raisina ho toy ny fiafaran'ny fiaraha-miaina ny fiangonana. Miantso ny hafa amin’ny teny fampaherezana. Henoy, tsapao ny tenanao. Miara-mihomehy rehefa tonga ny fotoana. Manaova sarin'ny tohatra ary ampiharo izany. Ampio ny hafa hahatsapa sy ho anisan’ny fiangonantsika eo an-toerana. Amin’izany fomba izany, dia manampy ny tenantsika hahatsapa ho anisan’ny fiangonana koa isika. « Isaorana anie Andriamanitra, Rain’i Jesosy Kristy Tompontsika, Rain’ny famindram-po sy Andriamanitry ny fampiononana rehetra, Izay mampionona anay amin’ny fahorianay rehetra, mba hampiononay izay rehetra tratry ny fahoriana rehetra koa amin’ny fampiononana izay nampiononanay ny tenanay. dia avy amin’Andriamanitra. Fa tahaka ny manjo anay ny fijalian’i Kristy no fampiononan’i Kristy anay koa.”2. Korintiana 1,3- iray).
Miaraka amin'ny lafiny rehetra ao an-tsaina amin'ity raharaha ity, andao isika hanokana fotoana hivavaka. Mivavaha mba hitohizan’ny filazantsara amin’ireo manodidina antsika. Mivavaha ho an’ny fitondram-panjakantsika sy ho an’izay rehetra manam-pahefana handray fanapahan-kevitra feno fahendrena: « Mivavaha indrindra ho an’izay manana andraikitra eo amin’ny fitondrana sy ny fanjakana, mba hiainantsika amim-piadanana, amim-piadanana, amim-panajana eo anatrehan’Andriamanitra sy amin’ny fontsika amin’ny mpiara-belona amintsika. »(1. Timoty 2,2).
Mivavaha ho an ny fiangonana mba hitazomana hatrany ny rafitra ao anatin ny krizy. Ary ambonin'izany rehetra izany, mivavaha mba hidiran'ny fitiavan'i Jesosy anao any amin'ny hafa ary mivavaha ho an'ny hafa izay tena ilaina amin'izao fotoana izao. Mivavaha ho an'ny marary, ny marary ary ny manirery.